दाङ र रुकुमका स्थानीयको जोखिमपूर्ण यात्रा | गृहपृष्ठ
Home समाचार दाङ र रुकुमका स्थानीयको जोखिमपूर्ण यात्रा
दाङ र रुकुमका स्थानीयको जोखिमपूर्ण यात्रा
रुकुम पूर्व र पश्चिममा झण्डै ६३ करोड बजेट घट्यो -
यार्साको चोरी निकासी बढ्यो, रोक्न युवा परिचालन -
फागुन १, रुकुम । दाङको अमेलियादेखि रुकुम सल्लेसम्मको सडक खण्ड जिर्ण बन्दै गएपछि स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनेका छन् ।
राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गतको यो सडक खण्डको स्तरोन्नती समयमै नहुँदा विग्रिँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ । सडक जिर्ण हुँदा जोखिममा यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै चौरजहारी नगरपालिका–३ कि यसोदा परियारले भनिन्, ‘भगवान पुकार्दै यात्रा गर्नुपर्छ ।’
गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विश्व बैङ्कको ६१ करोड, ५० लाख ८७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँमा ओटासिल गरिएको सडक गुणस्तरहीन भएका कारण एक वर्षमै विभिन्न भागमा उप्किनुका साथै भत्किएको छ । सडकमा रहेको ओटासिल भत्किएपछि राप्ती लोकमार्ग सडकखण्ड झन अप्ठेरो र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय रुकुम चौरजहारीका इन्जिनियर नविन शाहका अनुसार राप्ती लोकमार्गमा पर्याप्त बजेटको अभावमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन । ‘हामीले सडक फराकिलो र कालोपत्रेको योजना बनाएर पनि बजेट अभावका कारण निर्माण गर्न नसकिएको इञ्जिनियर शाहले बताए ।’
सडक जिर्ण भएका कारण यातायातका साधनहरु सञ्चालनमा समेत अप्ठेरो भएको सानीभेरी यातायात सेवा समितिका महासचिव बीरबहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘सडक जिर्ण हुँदा एक वर्षमै गाडी थोत्रा हुने गरेका छन् ।’
सडक टालटुलमै दुई करोड
सल्यानको सिमना खौलादेखि रुकुम सदरमुकाम मुसिकोट सल्लेसम्मको सडक खण्ड टालटुल गर्न थालिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी रुकुम पश्चिमको रू. दुई करोड लगानीमा राप्ती लोकमार्ग रुकुम खण्ड टालटुल गर्न थालिएको छ ।
सडक खण्डमा खाल्डा खुल्डि परेका कारण टालटुल्ल गर्न थालिएको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर नविन शाहका अनुसार टाल्लटुल्ल गर्न दुई करोड रुपैया विनियोजित गरिएको छ । राप्ती लोकमार्ग अन्र्तगतको रुकुम खण्ड कालोपत्रे गर्न बजेट निकासा नभएपछि सडक टालटुल गर्न थालिएको हो । सडक टालटुलको काम दुई खण्डमा भएको छ ।
जसमा खौलादेखि पितीवाङसम्मको सविन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र पितीवाङदेखि सल्लेसम्मको सडक टालटुल गर्ने जिम्मा मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले लिएको छ । जसको लागि एक÷एक करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आगामी तीन महिना (बैशाख) भित्र १ सय २४ घनामिटर सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डी पुर्ने काम हुनेछ ।
राप्ती लोकमार्गमा गाडी दुर्घटना बढेको छ । विशेषगरी सडक निर्माण भएको लामो सममसम्म पनि सडक चौडा नभएका कारण सडक जिर्ण बनेसँगै दुर्घटना बढेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सल्यानले बताएको छ ।
सडक साँघुरो हुनु, डाईभरको लापरबाही, थोत्रा गाडी, यातायातमा सिण्डिकेट प्रणाली लागू भएकै कारण गाडी दुर्घटना बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी इन्चार्ज गोपाल शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘राप्ती लोकमार्गमा सयौ जनाको ज्यान गएको छ ।’ सडक सुधार भएको छैन ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सल्यानका अनुसार २०७१÷७२ देखि हालसम्म १ सय २७ ओटा गाडी दुर्घटना भएको र जसमा ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । यसअघि पनि राप्ती लोकमार्गमा थुप्रै गाडी दुर्घटना भएपनि कति जनाको मुत्यु भएको भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन । २०६३ सालमा सल्यानमा भाण्टाखोलामा गाडी दुर्घटना हुँदा झण्डै ४० भन्दा बढीको मुत्यु भएको थियो । त्यसपछि पनि धेरै गाडी दुर्घटना भएको र धेरै जनाको ज्यान गएको छ ।
राप्ती लोकमार्ग अन्र्तगत दाङको अमेलियादेखी मुसिकोट सल्लेसम्म १ सय ६८ दशमलव ५४ किलोमिटर सडक पर्दछ । भौगलिक रुपमा कमजोर भिरोलो जमिन भएका कारण वर्षे पहिरो र बाढीले सडक क्षति हुने गर्दछ । अन्य बैकल्पिक सडक नहुँदा रुकुम (पूर्व–पश्चिम) र सल्यान स्थानीयहरु यसै सडक मार्फत ओहरदोहर गर्न बाध्य छ ।
राप्ती लोकमार्गमा सयौं सवारी साधन रुकुम (पूर्व–पश्चिम) र सल्यान जिल्लाबाट नेपालगञ्ज काठमाडौं, दाङ, पोखरा लगायतका शहरमा आवतजावत गर्ने गर्दछन् । रुकुम र सल्यान जिल्लाको मुख्य सडक खण्ड जिर्ण बन्दा यात्रुहरुमा समस्या भएको छ ।